14,893,005 unique visits
Read More · 0 Comments · 2722 Reads
· DEG DEG: Dowladda oo xil ka qaadis ku sameysay Taliyihii Ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo
Dowladda Federalka ee Soomaaliya ayaa waxay xil ka qaadis ay ku sameysay Taliyihii Ciidamada Militariga Dowladda ee Gobolka Gedo Jamaal Xasan Farey.
Shiil on May 25 2013 15:53:09 ·
Read More · 0 Comments · 1644 Reads
· Wefdiga Dowladda oo kulan lagu taageeraayo War Murtiyeedkii Madaxda Igad la qaatay Odayaasha Kismaayo
Wefdiga Dowladda Federalka ee Soomaaliya ka socda ee ku sugan Magaalada Kismaayo, ayaa waxay maanta Magaalada Kismaayo kulan ballaaran, ay kula qaateen wefdiga ka socda dhinaca Dowladda.
Shiil on May 25 2013 15:10:25 ·
Read More · 0 Comments · 1146 Reads
· Uhuru Kenyatta "Somalia way ka baxday Marxaladii Kmg, Dowlada ayaana uga dambeenaa Dhismaha Maamulada"
Madaxweynaha Dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay in Dhismaha Maamulada Gobolada Soomaaliya, ay uga dambeen doonaan Dowladda Federalka ee Somaliya.
Shiil on May 25 2013 14:20:52 ·
Read More · 0 Comments · 1956 Reads
· Ciidan ka wada tirsan Dowladda oo maanta ku dagaalamay Magaalada Muqdisho
Ciidan ka wada tirsan Ciidamada Militariga ee Dowladda, ayaa waxay barqanimadii maanta ay ku wada dagaalameyn Magaalada Muqdisho.
Shiil on May 25 2013 13:45:23 ·
Read More · 0 Comments · 1268 Reads
· DEG DEG: C/naasir Seeraar oo sheegay inaysan faraha ka laaban doonin, dhaq dhaqaaqa Dowladda ee Kismaayo
Col. C/naasir Seeraar Maax oo kamid ah Saraakiisha Maamulka Sheekh Axmed Madoobe, ayaa wuxuu iclaamiyay inaysan faraha ka laaban doonin, dhaq dhaqaaqyada ay Dowladda Somaliya ka wado Magaalada Kismaayo.
New York on May 25 2013 13:04:52 ·
Read More · 0 Comments · 3229 Reads
· Diyaarad sida dareyska Ciidamada Dowladda oo Garoonka Kismaayo ka caga dhigatay
Diyaarad agab Militari u sida Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Kismaayo, ayaa waxay ka caga dhigatay Garoonka Magaalada Kismaayo.
New York on May 25 2013 12:53:57 ·
Read More · 0 Comments · 3194 Reads
· Qarax khasaaro badan geystay oo goor dhaw ka dhacay Magaalada Baydhabo
Qarax sameeyay daryan xoogan oo khasaaro kala duwan geystay, ayaa wuxuu goor dhaw oo maanta ah uu ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
New York on May 25 2013 11:03:07 ·
Read More · 0 Comments · 1543 Reads
Read More · 0 Comments · 920 Reads
Read More · 0 Comments · 2012 Reads
· Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay duulaano ku yihiin Baraawe, Qoryooley, Kuntuwaarey & Buulo Mareer
Read More · 0 Comments · 964 Reads
Read More · 0 Comments · 2008 Reads
Read More · 0 Comments · 627 Reads
Read More · 0 Comments · 3812 Reads
Read More · 0 Comments · 2321 Reads
Read More · 0 Comments · 4684 Reads
Read More · 0 Comments · 4538 Reads
Read More · 0 Comments · 4949 Reads
Read More · 0 Comments · 1048 Reads
Read More · 0 Comments · 871 Reads
Read More · 0 Comments · 2292 Reads